Tiorkia, ankizivavy 13 taona manao fanamby amin’ireo fitsaratsaram-poana amin’ny atletisma · Global Voices teny Malagasy
Te-ho mpitondratenin'ireo ankizivavy manerana an'i Tiorkia i Akpinar
Voadika ny 09 Jolay 2021 5:01 GMT
Pikantsary iray nalaina tamina lahatsary YouTube tamin'ny antsafa nataon'i Merve Akpinar tao Ankara.
Potehan'ny ankizivavy iray mpilalao handball avy any Şanlıurfan, any amin'ny faritany atsimo ao Tiorkia ireo fitsaratsaram-poana, no sady mandrisika ny fanohanana ny fandraisana anjaran'ireo ankizivavy ao an-tanàna sy manerana ny firenena. Tao anaty antsafa iray nataony ho an'ny masoivohom-baovao ao an-toerana, tao Ankara renivohitr'i Tiorkia, Merve Akpinar, 13, nilaza fa, “Noroahan-dry zareo aho fony nanomboka, tamin'ny filazàna ahy ho tsy afaka manao short na miaraka milalao amin'ny ankizilahy noho izaho ankizivavy. Fa avy eo nanontaniako ny antony tsy ahafahako milalao tahaka ny olona rehetra. Araka izany dia nivoady aho fa hanova ny zaravintan'ireo ankizivavy ao amin'ny vohitra misy ahy.” Niparitaka be ilay antsafa nataony, teny anivon'ireo olona ambony sy ireo klioba mpitantana fanantanjahantena manohana ny fitarainany teny anaty tambajotra sôsialy.
Nambaran'ilay ankizivavy tamin'ireo mpanadihady fa tany amin'ny kilazy T5 izy no sambany nahita ny handball. Na eo aza ny tsindry henjana ara-tsôsialy atrehana mba hihatahana amin'izay tsaraina ho tsy mifanaraka / tsy sahaza ho an'ny ankizivavy, tsy nialàny ny hetahetany hiditra ho ao anatin'ny ekipa sy hilalao. Manandanja manokana ny tantaran'i Akpinar, indrindra fa ao anaty firenena iray izay adihevitra tsy mitsahatra ny momba ny tolon'ireo vehivavy hisian'ny fitoviana. Mitatra hatrany amin'ny fanatanjahantena ihany koa ny tsy fahampian'ny fitoviana. Fandalinana iray vao haingana no mamintina fa anisan'ireo vato misakana amin'ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fanatanjahantena ao Tiorkia ny “filambaniny ara-nofo, ny karama tsy mitovy, ny famerana ny famatsiambola, ny zara fa firesahan'ny media azy ireo, ary ny dindon'ny fianakaviana”.
Akpinar, iray amin'ireo fito mpiray tampo, dia nilalao tao anaty ekipa handball hatrany amin'ny kilasy T6. Nolazainy tao anaty antsafa iray nifanaovany tamin'ny Demiroren News Agency, fa niteny nisolo tena ireo ankizivavy hafa marobe manerana an'i Tiorkia izy. “Tsy Merve fotsiny aho. Izaho no feon'i Fatma, ilay mpanangona hasy ao Çukurova. Izaho no feon'i Şemsi avy ao Harran. Izaho no fanantenan'ireo ankizivavy tanora. Tiako ny ho feon'ireo ankizivavy rehetra eto Tiorkia. Mino aho fa afaka manova ny toetsaina [sic]. Betsaka no tafita tamin'io làlana io. Raha sitrak'Andriamanitra, ho tafita ihany koa aho. Tsy nosainiko velively hoe izay holazaiko ao anatin'ilay antsafa dia hahasarika sain'olona maro. Raha tian'ireo ankizivavy, afaka ny hahomby be tahaka ireo zazalahy koa ry zareo.”
Anisan'ireo mpanakafy azy ilay mpanoratra sy mpanao tantara foronina, Elif Şafak, ary klioba tiorka marobe mpilalao baolina kitra izay naneho ny fanohanany tety anaty aterineto:
Ankizivavy 13 taona ao Tiorkia manazava an-dranomaso ny fomba nanetrena sy nanavahana azy noho izy ankizivavy & ny fahavononany hanova io tsy fitoviana mibaribary io. Fanajàna lehibe sy amin'ny fo manoloana ny talentany, ny fahasahiany, fikirizany. Brava #merveakpınar pic.twitter.com/zDhKkhQF6x
— Elif Shafak (@Elif_Safak) 6 Jolay 2021
Ianao no fanantenan'ireo ankizivavy rehetra eto Tiorkia. Mijoro miaraka aminao izahay sy ireo ankizivavy rehetra amporisihanao.
Ianao sy ny fahasahianao ary ny tigetranao no fanantenan'ireo ankizivavy rehetra. Eo anilanao izahay
Nanamafy ireo hafatra fanehoana firaisankina sy fanohanana koa ny klioba mpilalao baolina kitra Galatasaray. “Nampahatsiahivinao anay indray fa ny fanantenana no lafy iray mahagaga eo amin'ny fiainana. Amporisihanao ireo ankizivavy Merve tanora. Ny fahasahiana, ny fikirizana, ny hery sy finoanao ary ireo ankizivavy hafa rehetra, no mahatonga ny fanatanjahantena ho zavatra mahafinaritra kokoa,” hoy ny bitsika avy amin'ilay klioba.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fikirizan'i Akpinar, nanambara tao amin'ny Twitter ny ben'ny tanànan'i Ankara, Mansur Yavaş, fa hanampy amin'ny fametrahana ny Şanlıurfa Children of the Sun Youth and Sports Club ho an'ny ankizy rehetra tsy anavahana:
Nahazo aingam-panahy tamin'ny fikirizana sy fahombiazan'i Merve, miomana ny hametraka ny Şanlıurfa Children of the Sun Youth and Sports Club izahay, klioba rahavavin'ny EGO Sports Club ato aminay. Inoanay fa ny hery sy finoan'i Merve no ho feon'ireo vehivavy rehetra sy fanantenana ho an'ny làlan-dry zareo.
Nidera an'i Akpinar i Dilek Kaya İmamoğlu, vadin'ny ben'ny tanànan'i Istanbul, nibitsika hoe, “Na dia nilazàna aza izy fa tsy mahazo manao shorts, tsy afaka milalao, ary tsy afaka mahavita manao an'io, dia manana hafatra ho antsika i Merve ilay manohy ny nofinofiny: ‘Hovaiko ny finoana ananan'ireo ankizivavy rehetra eto an-tanànako.’ Ry Ankizivavy malala rehetra, azoko antoka fa ho aingampanahy ho an'ireo ankivavy an-jatony, an'arivony ianareo. Zavadehibe ny fanànana anareo.”
Ny faniriana amin'izao fotoana ho an'ity ankizy amin'ny kilasy T9 ity dia ny hanànan'ny sekoly efitrano vaovao hanaovana handball hahafahany manazatra tena miaraka amin'ny ekipany. Raha niresaka tamin'ny Demiroren News Agency (DNA), nilaza i Ali sy Emine Akpinar, ray sy renin'i Akpinar, fa nanohana hatrany ny zanany vavy izy ireo tamin'ireo ezaka fanatanjahantena nataony. Tao anaty antsafa iray ho an'ny masoivohom-baovao DNA, nilaza ny rain'i Akpinar fa mety hanova ny hoavin'ireo ankizivavy rehetra ny antsafa nataon'ny zanany vavy. “Tokony hanohana ny zanany vavy daholo ny rehetra ary hanome azy ireny ny fanabeazana. Tantsaha aho. Tsy mbola nijery velively lalao handball. Ny zanako vavy Merve no nahafantarako hoe amin'ny tànana no ilalaovana azy io. Tokony hanana fitokisana amin'ny zanany vavy ny rehetra. Nahoana ny ankizivavy no tsy ho afaka hilalao baolina toy ny ataon'ireo ankizilahy?”